Xaalada Degmada Hobyo oo ay dagaalo ka dheceen oo degen maanta – SBC
Xaalada Degmada Hobyo oo ay dagaalo ka dheceen oo degen maanta
Xaalada Degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa laga dareemayaa degenaansho maanta ka dib markii halkaasi maalin nimadii shalay ay ku dagaalameen maleeshiyo beeleedyo halkaasi wada dega.
Dhinacyada ay ka so kala jeedaan maleeshiyaadka dagaalamay ayaa wada dadaalo ay ku doonayaan in ay ku dejiraan xaalada amaan guud ahaan Balse kooxaha dagaalamay waa kuwo is hor fadhiya oo markasta la fili karo dagaal dhexmara.
Waxgarad iyo siyaasiyiin ka soo kala jeeda Maamulada Galmudug iyo Ximin iyo xeeb ayaa iyana dhankooda muujinaya dadaalo ay ku kala dhexgalaraan dadka uu dagaalku dhexmay.
Labada dhinac ee dagaalamay oo saxaafada siyaabo kala duwan ugu waramay ayaa sheegay in dagaalka u dhexeeya uusan aheyn mid ay ku lug leeyihiin maamulada Galmudug iyo Ximin iyo xeeb ayna dagaalameen oo qura maleeshiyaad qaldan oo dantooda wada un.
Markii uu soo ifa faalo baxay Dagaalka ka dhacay Hobyo ayaa warbaahinta Qaar ay sheegtay in dagaalka ka dhacay Hobyo ay ku lug leeyihiin maamulada Ximin iyo Xeeb iyo Galmudug, balse taasi waxaa beeninaya kooxihii dagaalamay.
Madaxweyne ku xigeenka Galmudug C/samad Nuur Guuleed ayaa dhankiisa saxaafada u sheegay in maamulkiisa uu bari ka tahay dagaalka ka socda Hobyo balse ay ka quseyso oo keliya sidii talaabo looga qaadi lahaa kooxaha caadeystay in dagaalo aano qabiil halkaasi ka geystaan.
Sikastaba ha ahaatee Hobyo waa degmo ka mid ah Gobolka Mudug waxayna leedahay Xeeb, waxaana inta badan isha ku haya labada maamul waa Ximin iyo xeeb iyo Galmudug, maalmihii la soo dhaafayna waxaa jiray hadal heyn ku aadan in maamulka Galmudug uu doonayo in uu deegaankaasi ka sameysto Deked Macmal ah, waxaana taasi ka biyo diiday maamulka Ximin iyo xeeb.
Mooryaan baa dagaalamaysa.Waxaanse ka baqayaa in ay ku wax yeeloobaan dad masaakiin ah oo an cidna wax dhiba u geeysan.Moiryaanta soomaaliya ee wada hubaysan illaa wadanka laga cribtiro nabad gelyadu sax ma wada noqonayso.